မြ၀တီ - နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တတိယ အကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ်ရေ ညီလာခံ သို့ တက်ရောက် လာသည့် တီမော လက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယ သမ္မတ နိုင်ငံ တို့မှ ဝန်ကြီးများအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တတိယ အကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ်ရေ ညီလာခံ သို့ တက်ရောက် လာသည့် တီမော လက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယ သမ္မတ နိုင်ငံ တို့မှ ဝန်ကြီးများအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
Tuesday, 12 December 2017 09:18	font size decrease font size increase font size
ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၁
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် တတိယ အကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ် ရေညီ လာခံ ( The 3rd Asia-Pacific Water Summit- 3rd APWS) သို့ တက်ရောက်လာသည့် တီမော လက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံတို့မှ ဝန်ကြီးများအား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ် အလုံခန်းမ၌ သီးခြားစီတွေ့ဆုံသည်။
ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တီမော လက်စ်တေ ဒီမိုကရက် တစ် သမ္မတ နိုင်ငံမှ Senior Minister and National Security Advisor , Former President H.E. Mr. Jose Ramos - Horta အား နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲတွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ တွေ့ဆုံသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ မှ Minister of Land, Infra-structure, Transport and Tourism H.E. Mr.Keiichi Ishii နှင့်လည်း ကောင်း၊ နံနက် ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ Minister of state and Housing and Urban Affairs H.E.Hardeep Singh Puri နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး၊ ဦးအုန်း မောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံး အဖွဲ့ ဝင်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
Read 216 times	Last modified on Tuesday, 12 December 2017 09:25
More in this category: « တပ်မတော်မြစ်တွင်းသွား ဆေးရုံ ရေယာဉ်(ရွှေပုဇွန်)နှင့် မြစ်ရေယာဉ်(စကု)တို့ ဒေးဒရဲမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ ပြည် သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်	တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် Gen. Ranjendra Chhetri က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက် »